Garoowe : Puntland oo si weyn looga dareemayo diyaargarowga Xuska 1 Augost oo ku adan asaaskii Dowladda puntland ee Soomaaliyeed.
Xuska Maalinta 1Augost oo ah maalintii dhidibada loo tagay Maamulka Puntland ee la asaasay 1Augost sanadii 1998 ,waxaana deegaanadda puntland ka socda diyaargarow ku adan xalad balaran oo loo qabanqabinayo sidii loo qaban lahaa munasabadda xuska Maalintaas oo ah Maalin ku wayn dadka iyo dowladda deegaanadda puntland .
Meelaha diyaargarowga sida aadka ah aad uga dareemayso ayaa waxaa ka mid ah Madaxda puntland ee Garoowe,waxaana la arkayaa ololaha ay wadaan qaybaha bulshada sida Haweenka,Dhalinyarada ,Ardayda iyo Kooxaha Fanka iyo suugaanta oo ay horkacayaan kooxda walaalaha waaberi puntland oo mudo ku howlanaa diyaarinta Heesaha,Buraanburka ,Gabayada iyo noocyada suugaanta ee ay ugu talo galeen xuska maalintaas.
Dhanka kalana waxaa magaaladda Garoowe kasocda howlgalo xoogan oo ay wadaan ciidamadda amaanka puntland kuwasoo ay uga golleyihiin sidii ay u adkayn lahayeen amaanka iyo kala danbaynta deegaannada puntland si munasabadani ay u dhacdo jawi nabadeed.
Xuska Munasabadda ayaa lagu wadaa inuu dhaco1Augost ,iyadoo la filayo in la qabto xaflad wayn oo isugu jira khudbado ay jeedinayaan masuuliyiinta Dowladda ,saladiinta iyo qaybaha Bulshada Rayidka ah ee puntland & isu soo baxyo lagu waynaynayo qiimaha maalintan ay ugu fadhido shacbka ku dhaqanka puntland .
Maamulka Galmudug Oo Yeelanaya Baarlamaan Cusub
Baarlamaanka cusub ee uu yeelanayo Maamulka Galmudug ayaa maanta lagu dhawaaqay kaasi oo laga sugayo inay soo doortaan Madaxda sare ee Maamulka Galmudug State.In ka badan 20 xubnood oo kamid noqon doona baarlamaanka cusub ee Maamulka Galmudug iyo Gudoonka sare ayaa maanta lagaga dhawaaqay munaasabad ka dhacday Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka Maamulka Galmudug State mar kale loo doortay Mudane Xasan Maxamuud Heyl oo hore u ahaa gudoomiyihii baarlamaanka Galmudug.
Afhayeenka baarlamaanka Maamulka Galmudug ee maanta la doortay ayaa waxa uu Saxaafada u sheegay in baarlamaanka Galmudug ay sugayso shaqo culus oo ay kamid tahay inay soo daartaan Madaxda sare ee Maamulka Galmudug.
Mas'uuliyiinta Maamulka Galmudug ayaa waxaa maalmihii u dambaysay ayaa waxaa dhex yaalay khilaaf xoogan, iyadoo dhawaan Madaxweyne Caalin uu ku dhawaaqay Gudiga doorasho Maamulka Galmudug.
Police-ka Uganda Oo Soo Bandhigay Sawirada Nin Ay Ku Sheegeen Inuu Ka Tirsan Yahay Xarakadda Al-Shabab Ururka Al-shabaab
Police-ka wadanka Uganda ayaa soo bandhigay sawirada nin ay ku sheegeen inuu Soomaali yahay kana tirsan yahay Xarakadda Al-Shabab oo ka dagaalanta goboladda koonfurta Dalka Soomaaliya, kaas oo hadda ku sugan wadankaasi Uganda damacsana inuu weeraro ka gaysto sida Police-ku sheegay.
Afhayeenka cusub ee Police-ka Uganda Samson Kuteesa oo saxaafadda kula hadlayey xarunta taliska Police-ka ee magaalada Kampala ayaa sheegay in tiro ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ay gudaha usoo galeen wadanka Uganda kuwaas oo uu hogaaminayo nin uu magaciisa ku sheegay Maxamed
Liibaani Xaaji oo ah nin Soomaali ah sida uu yidhi.
Afhayeenku waxa uu sheegay in Maxamed Liibaan uu Shabaab ka tirsan iyo raga kale ee la socda ay wadaan qorshe ay weeraro uga gaysanayaan wadankaasi waxa uuna tilmaamay in sawiradiisa ay hay’addaha amaanka u qaybiyeen laguna dabo joogo.
Laamaha amaanka wadankaasi Uganda ayuu afhayeenku xusay in lagu wargaliyey in ay indho gooni ah u yeshaan muwaadinkan Soomaaliyeed ee Police-ka Uganda sheegeen inuu doonayo inuu weeraro wadankaasi ka geysto.
“Dhamaan hay’addaha amaanka gudaha iyo kuwa caalamiga ee argagixisada la dagaalama waanku ku wargalinay in dalka Uganda ay soo galeen xubno Shabaab ka tirsan oo uu hogaaminayo Maxamed Liibaan Xaaji oo Soomaali ah, isla markaana ay doonayaan inay weeraraan xarumo muhiim ah” ayuu yidhi
afhayeenka cusub ee dhawaan loo magacaabay ciidamada Police-ka Uganda Samson Kuteesa waxa uuna intaasi ku daray in ciidamadu hadda baadi goob ugu jiraan loo qabashada ninkaas.
Police-ka Uganda ayaa bishii hore ee June sidan oo kale u shaaciyay sawirada iyo magacyada nin Al-AShabaab ka tirsan oo ay sheegeen inuu dalka Uganda ka galay dhanka dalka Kenya walow mar dambe ninkaasi lagu qabtay dalka Tanzania.
Xarakadda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer go'aan saday inay Uganda weeraro ka gaysan doonto maadaama ay ciidamada Uganda ee qaybta ka ah hawl galada AMISOM ay ku sugan yihiin gudaha dalka, iyagoona dagaalo adag kula galay Al-Shabaab goboladda koonfurta Soomaaliya.
Cudurka Halista Ah Ee Ibolaha Oo Lagu Arkay Magaalada Kampala Ee Caasimada Dalka Uganda
Madaxweynaha Dalka Uganda Yoweri Musevin ayaa ugu baaqay shacabka Uganda in ay ka fogaadaan isa salaamida kadib markii Ebola virus lagu arkay Magaalada Kampala.
14 qof ayaa u geeriyooday iyadoo hal kamid ah uu ku geeriyooday Kampala iyadoo cudurkan uu ka dilaacay galbeedka dalka Uganda saddex toddobaad ka hor.
Ebola ayaa waxa uu kamid yahay cudurada faafa ee halista ah waxaana uu ku fidaa cudurkani istaabashada iyadoo baqolkiiba sagaashan qofka uu ku dhaco uu u geeriyoodo cudurkani.
Mr Museveni ayaa sheegay in madaxda caafimaadka ay isku dayayaan in ay raadiyaan dadka qaba cudurka Ebola isla markaana la karantiimaynayo.
Dadka waa inay ka fogaadaan isa salaamida, dhunkashada ama isu tagga si loogaga hortago cudurka inuu ku faafo.
Dadka reer Uganda ayaa loogu baaqay in aysan aasin qaraabada iyo dadka dhinta kuwaas oo looga shakisan yahay in ay u dhinteen cudurka Ebola.
Uganda ayaa saddex jeer uu ka dilaacay cudurka Epolaha 12 kii sano ee la soo dhaafay, kii ugu darnaa ayaa waxa uu ka dilaacay dalka Uganda sanadkii 2000 iyadoo 425 qof oo cudurkani ku dhacayna kalabadh ay u geeriyoodeen cudurkani.
Cudurka Ebolaha ayaa lagu arkay Magaalada Kampala kadib markii dhowaan la sheegay in Cisbitaalada la dhigay dadkii uu cudurkan ku dhacay ay ka carareen Cisbitaaladii la dhigay.
Sarkaal Ka Tirsan Ciidamada Dowladda Oo Ka Hadlay Ay Xalay Kooxda Al-shabaab Kusoo Qaaday Degmada Balcad (Dhagayso)
Kadib markii habeenimadii xalay ahayd ay dagaal gaadmo ah kusoo qaadeen Xoogaga Al-shabaab Ciidamada Dowladda ee ku sugan Degmada Balcad ayaa waxaa ka hadlay dagaalkaasi iyo khasaarihii uu gaystay Gen. Maxamed Maxamuud Saney oo kamid ah ah Saraakiisha Ciimada Dowlada ee ku sugan Degmada Balcad ee gobolka Shabellaha Dhexe, isagoona sheegay in uu dagaalkaasi ahaa mid gaadmo isla mar ahaan taana aysan ay kasoo furteen Ururka Al shabaab gaadhi nooca Homay ah khasaarana ay soo gaadh siiyeen Dagaalahanadaas weerarka soo qaaday waa sida uu hadalka u dhigaye.
Hadaba waraysigaasi oo dhamaystiran Halkan Hoose Ka Dhagayso.....
generaal maxamed maxamuud saney
Madaxweyne Shariif Oo Booqasho Saddexaad Ku Tagay Degmada Afgooye
Madaxweynaha Dowladda KMG Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta markii saddexaad booqasho ku tagay Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose.Booqashadan madaxweyne Sheekh Shariif ayaa la sheegay inay timid kadib markii cabasho badan ay kasoo baxday dad weynaha ku dhaqan Degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran, iyagoo dadku ay cabasho ka muujiyeen ciidamada Dowladda oo dhibaato u gaysta shacabka degen deegaanadaasi.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa safar dhulka ah ku gaadhay maanta Degmada Afgooye, isagoona halkaas kula kulmay Maamulka iyo Waxgaradka Degmada Afgooye. Tan iyo markii ay ciidamada Dowladdu la wareegeen gacan ku haynta Degmada Afgooye ayaa waxaa soo baxaya tacadiyo ay ka gaysanayaan ciidamada dowladda, iyadoo tacadiyadaana ay kamid yihiin Dil, Dhac, iyo Kufsi lagula kaco haweenka Deegaankaasi.
Cabashooyin badan ayaa kasoo yeedhay dadka deegaanka waxayna maamulka Degmada Afgooye iyo kan Ceelasha Biyahaba hore u cadeeyeen in aysan wax ka qaban karin dhibaatooyinka ay ku hayaan ciidamada bulshada rayidka ah ee ku nool deegaanadaas.
Shacabka ku dhaqan Degmada Afgooye iyo deegaanada hoostaga ayaa muujiyey in aysan kala kulmi jirin tacadiyadan haatan lagu hayo kuwo lamid ah maamulkii hore uga arimin jiray deegaanadaas ee ururka Alshabaab.
Hadaba ilaa iyo hadda lama oga tallaabada uu qaadi doono madaxweyne shariif si uu u soo celiyo kalsoonida luntay ee shacabka Degmadaasi.
Al-shabaab Oo Sheegtay In Dagaalyahano Ka Tirsan Ay Gudaha U Galeen Degmada Afmadow
Warbaahinta ku hadasha afka Ururka Al-Shabaab oo soo xiganaysa Saraakiil ka tirsan Kooxda Al-shabaab ayaa sheegtay in ay xalay mar kale gudaha u galeen Degmada Afmadow ayna la wareegeen qaybo kamid ah Degmadaasi Muddo kooban.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay weerar Madaafiic ah ku qaaday Degmada Afmadow oo dhawaan Al-Shabaab laga saaray hadana ay gacanta ku hayaan Ciidamada Dowlada, kuwa Raaskaanbooni iyo Ciidamada Kenya.
Saraakiil u hadashay Al-Shabaabka Jubooyinka ayaa sheegay in gudaha ay u galeen Afmadow gaar ahaan Saldhigyo Ciidamadu ay ku leeyihiin Degmadaasi, iyagoona sheegay in ay halkaasi kasoo qaateen saanad maletari.
Dhinaca Dowlada iyo Raaskanbooni ayaan wali kasoo bixin war ku aadan Dagaalkan ay xalay lagaga qabsaday Saldhigyo ku yaal Degmada Afmadow, Khasaaraha kasoo gaadhay iyo midka ay gaadhsiiyeen dhinaca xoogaga Al-Shabaab.
Xaalada Magaalada ayaa hada ah mid dagan waxaan gacanta ku haya Ciidamada Dowladda, Kuwa Raaskaambooni, iyo Maletariga kenya.
War Dagdag Magaalada Jowhar oo Alshabaab Kabaxay Saaka
Magaalada Johar ayaa waxaa naga soo gaarayaa in Ciidamada alshaab iskaga baxeen dadka magaalada jawhar ayaa kasuu baxay saldhigyadii alshabaab oo lafarujiyey .
Halakaas oo eey kaqaateyn dhamaan wixii uyaalay oo hub ciidan ah iyo idaacada eey kaqateen oo eey kadhaceyn dhalinyaro .
taas oo keentay iney sabatu tahay iney uga baxeyn cidamada somaliya iyo kuwa africa oo kusugun meel aad ugu dhaw Jawhar .
jawhar ayaa ah magaalo aad loogu cadaabi jiray dadka halkaas ku dhaqan oo godod lagu guri jiray oo hadana lagu dhagaxeynjiray.
dadka halkaas ku sugan ayaa dareemay nabad iyo amaan aan hore loogu arki jirin .
wixii war ah waan idinla soo socidsiindoonaa
Garoonka diyaaradaha Gaalkacyo oo lagu weeraray madaafiicda Hoobiyaha
Shalay galab ayaa waxaa madaafiicda hoobiyaha lagu weerary garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta usheegay in madaafiicda qaar ay ku soo dhaceen bartamaha garoonka,halka kuwo kalena ay ku dhaceen hareerihiisa.
Kooxo aan lagaraneen ayaa dhoowr jiho madaafiicda kaga soo tuurayay garoonkan oo ay inta badan adeegsadaan maamulada “Galmudug & Puntland”.
“Dhowr xabo oo madaafiicda hoobiyaha ayaa kusoo dhacday gudaha garoonka,waxaana garoonka kusugnayd diyaarad rakaab ah oo markaa duuli rabtay,sidoo kale qaar kale ayaafadhiyay garoonka iyadoo ay rakaab fuulayeen,majirto cid ay dhibaato kasoo gaartay” sidaa waxaa warbaahinta usheegay goob jooge diiday in magaciisa lasoo xigto.
Waxaa jira tuhun ah in ay ka danbeeyaan maleeshiyo maxali ah oo garoonka daris la ah,maamulayaasha garoonka ayaa warbaahinta usheegay inuu jiro qilaaf soo kala dhexgalay dad kayimid puntland iyo maleeshiyo dagan garoonka agagaarihiisa.
Al-shabaab oo xalay weerar kusoo qaaday degmada Balcad
Xalay saqdii dhexe ayaa marqura degmada balcad waxaa laga maqlay dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda,dagaalkan ayaa udhaxeeyay Ciidamada Doowlada iyo kuwa Al-shabaab. Al-shabaab ayaaweerar xoogan sadex jiho kaga sooqaaday magaalada saacadu markeey ahayd 1:10,waxa uuna istaagay 3:00 oo habeenimo,ilaa iyo hada lama soo sheegin wax qasaaro ah oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalameeysay iyo dadka rayidka ah maadaama ay ahayd xili habeen ah.
Dadka dagan magaalada oo aan laxiriirnay waxay sheegeen in dagaalku uu ahaa mid aad u xoogan layskuna adeegsaday hub cul culus, sidookale waxay sheegeen in Al-shabaab ay magaalada ku garaaceen madaafiicda Hoobiyaha.
Waa dagaalkii ugu cuslaa ee kadhaca magaalada Balcad tan iyo markii ay lawareegeen ciidamada doowlada iyo kuwa AMISOM
Wafti Uu Hogaaminayo Ra'iisal Wasaare Ku Xigeenka Dalka Ireland Oo Maanta Muqdisho Soo Gaadhay
Wafti uu hogaaminayo Ra'iisal Wasaare ku xigeenka Dowladda IreLand Eamon gelmoner ayaa maanta soo gaadhay Magaalada Muqdisho ee caasimada Dalka Soomaaliya. Wafdigan uu hogaaminayo Ra'iisal Wasaare ku xigeenka dalka Ireland ayaa waxa uu kulamo muddo kooban soconayey la qaatay Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas iyo qaar kamid Golaha wasiirada Dowladda KMG Soomaaliya.
Kulankan kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Ra'iisal Wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale Ra'iisal Wasaare ku xigeenka dalka Ireland Mr Eamon gelmoner, waxaana ugu horeynba hadalka qaataya Ra'iisal Wasaare Gaas oo ka warbixiyey xaalada uu haatan ku sugan yahay dalka Soomaaliya sida arrimaha Road-mapka iyo xaalada Bini aadinimo ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya.
Mr Eamon Gelmoner oo ah Ra'iisal Wasaare ku xigeenka dalka Ireland ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in Dowladda Ireland ay fulinayso balan qaad ku aadan in lacag dhan ilaa Afar milyan oo Dollarka Maraykanka ah oo u dhiganta ilaa Saddex milyan oo Euro ah taas oo ay ku taageerayso Hay’addaha Dowladiga, kuwa aan Dowladiga ahayn iyo Sidoo kale kuwa qaalibsan dhanka Bini aadinimada.
Hadaba safarkan uu maanta ku yimi Ra'iisal Wasaare ku xigeenka Ireland ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee uu ku yimaado dalka soomaaliya, iyadoona dowladda Ireland ay hore balan qaad kugu sameeyay dalka Soomaaliya waxa ayna dowlada Ireland horey dalka Soomaaliya ay ugu deeqday lacag gaadhaysa ilaa 30-milyan oo Euro ah.
Hay'adda Culuma Soomaaliyeed Oo Si Kuluul U Dhaleeceeyey Dastuurka Cusub
Hay'adda culumadda Soomaaliyeed ayaa kasoo horjeesatay nugulada uu ka kooban yahay Dastuurka cusub ee loo samaynayo dalka Soomaaliya. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah Guddoomiyaha Hay’adda culumadda Soomaaliyeed oo isaga iyo ku xigeenkiisa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo 0o saxaafadda maanta si wadajir ah ula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dastuurka cusub qodobo ku jira qaarkood ay yihiin kuwa ka horimaanaya Diinta islaamka, sidoo kalena dhaawacaya dhaqanka iyo jiritaanka umadda Soomaaliyeed. Ugu horeyn Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo goobta ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in qodobada kala ah Qaangaadhka , Gudniinka gabdhaha iyo Xuduudaha dalku ay yihiin kuwa aan la aqbali karin. Sidoo kale Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa isna ka dhawaajiyey in dowladda hada jirtaa ay horay u balan qaaday in dalka ay ku dhaqayso shareecada islaamka laakiin haatan ay u muuqato in ay hareer martay.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ugu dambayn sheegay inuu ugu baaqayo saxiixayaasha habraaca marxalada kala guurka in aysan shacabka Soomaaliyeed u horseedin dhibaato ka dhalata Dastuurka cusub ee loo samaynayo dalka soomaaliya.
Hadaba Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soconaya Shirkii Ansixirta Dastuurka oo maalintii shanaad galay oo ay ka qayb galeen ilaa 825- Ergo kaas oo lagu doonayo in lagu meel mariyo Dastuurka cusub walow ay jiraan eedeymo loo jeedinayo dastuurka cusub.
Amisom iyo ciidanka Dowlada oo tagay deegaanka Qalimow ee G/Sh/dhexe
Cabsi xoog leh ayaa ka jirto saakay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe kadib marki ciidamada Amisom iyo kuwa dowlada ay soo gaareen meel in yar u jirto deegaanka Qalimoow.
Dadka ku sugan Qalimoow oo qiyaastii 30-km dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Jowhar ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay joogaan meel 7-km u jirto deegaanka sidoo kalana ay Al Shabaab iyaguna difaac ka galeen afaafka hore ee Qalimoow.
Sida wararka aan ku heleyno ciidamada Amisom iyo kuwa dowlada ayaa sidoo kale qaar ka mid ah gaadiidkooda dagaalka u diray dhanka deegaanka Xawaadleey oo ku yaalo jiinka wabiga Shabelle.
Magaalada Jowhar-na cabsi weyn ayaa ka jirta iyadoo maamulka Al Shabaab uu xalay ilaa saakay magaalada ka waday dhaq dhaqaaq dagaal.
Dadka qaar ayaa sheegaya in ay ka baxeen magaalada madaxda iyo gaadiidkooda dagaalka, balse aanan la ogeyn in ay soo aadeen dhanka Qalimoow ama in ay u baxeen deegaano kale.
Wixi kusoo kordha dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa.
Faahfaahin ka soo baxeysa dagaalo guulo laga kala sheegtay oo shalay ka dhacay degaanada Buusaar iyo Yurkud
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan dagaalo aad u qaraar oo shalay gelinkii dambe ka dhacay degaanka Buusaar oo ku yaala duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kuwaasoo dhexmaray ciidamada Kenya iyo kuwa dowlada KMG Somalia oo hal dhinac ah iyo xoogaga Al-Shabaab.
Wararku waxay intaa ku darayaan in dagaalkaas uu bilowday ka dib markii xoogaga Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo gaadiid ah oo wateen ciidamada huwanta oo marayey dhul howd ah oo u dhexeeya degmada Ceelwaaq iyo degaanka Buusaar.
Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday dagaalkaas kaasoo daryankiisa laga maqlayey degmada Ceelwaaq, waxaana dagaalkaas oo socday muddo saacado ah labada dhinac ka soo gaaray khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo tirakoob sax ah aan laga heynin.
Dagaalkaas waxaa guulo ka sheegtay labada dhinac, iyadoo gudoomiyaha gobolka Gedo ee dowlada Somalia Maxamed Cabdi Kaliil uu sheegay in ciidamadooda iyo Kenya lagu soo weeraray qarax miino xili ay marayeen degaankaas Buusaar, isagoo xusay in sadex askari ay kaga dhaawacmeen uuna halkaas ka dhacay dagaal kooban oo ay khasaare badan ku gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Shiikh C/casiis Abuu Muscab afhayeenka ciidamada Al-Shabaab ayaa isna waxaa uu sheegay iney weerar dhabo gal ah ku qaadeen kolonyo ay wateen ciidamo Kenyan iyo Soomaali ah oo marayey agagaarka degaanka Buusaar ayna halkaas ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh.
Dhinaca kale, dagaal labaad ayaa isla shalay galab ka dhacay degaanka Yurkut oo ku yaala xadka kala qeybiya gobolada Bay iyo Gedo ka dib markii xoogaga Al-shabaab ay weerareen fariisimo degaankaas ay ku leeyihiin ciidamada Itoobiya iyo kuwa DKMG ah waxaana dagaalkaas wararku ay sheegayaan in illaa gabal dhacii xalay uu soo gaaray.
Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaha gobolka Gedo ee dowlada Somalia ayaa sheegay in dagaalkaas ay Al-shabaab soo qaadeen jab xoogana loogu geystay isagoo xusay in meydadka 27 nin oo laga dilay ay illaa saaka daadsan yihiin duleedka degaanka Yurkut, isagoo xusay in kuwa baxsadayna ay ku daba jiraan ciidamo xoog lehna ay kaga daba tageen dhulka howdka ah ee ku yaala duleedka degaankaas, kamana hadlin khasaaraha dhinacooda soo gaaray.
Afhayeenka ciidamada Al-Shabaab Shiikh C/casiis Abuu Muscab oo isna dagaalkaas ka hadlay ayaa sheegay in ciidankooda ay weerar ku qaadeen ciidamo Itoobiyaan iyo Soomaali ah oo ku sugnaa degaanka Yurkut, wuxuuna xusay iney kala wareegeen fariisimo ay duleedka degaankaas ku lahaayeen, hub badana ka furteen, isagoo sheegay in ciidamada ka soo hojeeday ay iskugu geeyeen gudaha degaanka Yurkut khasaare nafeed oo xoog lehna u geysteen.
Ma jiraan ilo madax banaan oo xaqiijinaya guulaha ay labada dhinac ka sheeganayaan dagaalaada ku dhexmaray gobolka Gedo qeybo ka mid ah hase ahaatee xaalada goobihii la isku fara saaray ee Buusaar iyo Yurkut ayaa lagu soo waramayaa iney saaka degan yihiin.
Golaha amniga oo maalmaha soo socda go’aano ka qaadanaya madaxda Soomaalida ee musuq-maasuqa lagu eedeeyey
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muddo hal sano oo dheeri waxay shaqadooda ugu dareen kooxda dabagalka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ee loo yaqaano monitoring Group.
Goluhu wuxuu sheegay in kooxdan oo sidoo kale la socota dalka Eritrea in mudda hal sanoo lagu sii daray shaqadooda taasoo ku eg 25-ka bisha August ee sanadka 2013-ka, waxaana la sheegay in kooxdan loogu talagalay inay baaritaan ku sameyso dhaqdhaqaaqyada ka socda Soomaaliya sida dhaqaalaha iyo gaadiid badeedka soo gaala dalka Soomaaliya, hubka qarsoodiga lagu soo gelliyo Soomaaliya.
Sidoo kale kooxdan waxay baaritaan ku sameyn doonaan wax yaabaha laga dhoofiyo Soomaaliya, dhadhaqaaqyada ka socda dekaddaha iyo Garoomada iyo waxyaabaha kale ee la ka dhan ah cunaqabateynta hubka ee dalka iyo dhaqaalaha dalka soo gala sida loo isticmaalo.
Kooxdan oo dhawaan u gudbisay warbixin ka kooban dhowr bog oo ay ka diyaarisay Soomaaliya oo ay ku jiraan in madaxda ugu sareeysa dalka iyo shaqsiyaad kale oo xiriir dhow ay la leeyihiin ama ka tirsan dowladda KMG ay lunsadeen dhaqaalo badan oo loogu talagalay dadka iyo dalka Soomaaliya, waxaana warbixintaasi uu Goluhu si rasmi ah ugu doodi doonaa 31-da bishan, markaas oo laga yaabo in qodobo adag ay soo saaraan.
Dowladda KMG Somalia iyo urur goboleedka IGAD oo wada qorshe maamul loogu sameynayo gobolada Jubbooyinka
Urur goboleedka IGAD iyo dowladda KMG ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ka dib markii wafdi ka soo tagay magaalada Nairobi ay kulan la yeesheen Madaxweyne Sheekh Shariif, Ra’isul wasaare Gaas iyo Guddoomiye Shariif Xasan iyo wasiiro kale.
Waxay ka wada hadleen dhameystirka shirka Nairobi ay ka waddo urur goboleedka IGAD ee looga hadlayey maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka.
Shirka ayaa ujeedkiisu ahaa in urur goboleedka IGAD ay wargeliso kalana tashato dowladda KMG maamul u sameynta Jubbooyinka iyo Gedo iyo in dowladda KMG laga dhageysto wixii talo ah ama su’aalo ah ee ay ka qabaan arintaas.
Dood iyo falanqeyn ka dibna waxaa wararku ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda KMG Sheekh Shariif uu garwaaqsadey muhiimadda ay leedahay maamul u sameynta Jubbooyinka isagoo sheegey inuu guddi u soo diri doono shirka kasocda Nairobi ee looga hadlayo.
Sida uu warbaahinta u sheegay Col. Ciilmooge oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda KMG ee gobolada Jubooyinka shirkana ka qeybgalay is afgarad iyo isfaham uu ku dhamaaday kulankaasi.
Gobolada ayaa waxaa intooda badan gacanta ku haya xoogaga Al-shabaab, waxaana ku sugan ciidamo fara badan oo dhinacyo kala duwan metelaya sida dowlada KMG Somalia, Raaskambooni iyo kenya kuwaasoo wada howlgalo ay doonayaan iney goboladaas uga xoreeyaan Al-shabaab inkastoo la sheego iney gaabis yihiin
AMISOM oo diyaarado dagaal keensaneysa Todobaadka danbe
Sida ay sheegeen saraakiil katirsan AMISOM waxaa toddobaadka dambe magaalada Muqdisho imaanaya illaa afar diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ee loo adeegsado dagaalada iyo duqeymaha kuwaasoo la siiyey ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan taliska Midowga Afrika ee magaalada Muqdisho ayaa qiray in sidoo kale labo diyaaradood oo nooca gurmadka caafimaadka loo adeegsan doono ay caawin doonaan diyaaradaha dagaalka ee ay keensanayaan.
Diyaaradaha ayaa qeyb ka ah ballanqaadkii Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay uu u sameeyay hawlgalka AMISOM oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab. Golaha Amaanka ayaa sidoo kale sanadkan horaantiisii ogolaaday in tirada ciidamada AMISOM la gaarsiiyo illaa 18,000 askari iyadoo ay ku soo biireen wadamada Jabuuti, Kenya iyo Siiralyoon oo hadda ciidamadooda ay ka dagaalamayaan gobolada Gedo iyo Jubbooyinka ee koonfurta dalka.
Marka ay ciidamada AMISOM helaan diyaaradahan nooca dagaalka ah oo sida la sheegay, casri ah ayaa la filayaa inay bilaabeen wajiga cusub ee waxa ay ugu yeereen ‘hawlgalka baacsiga Al-Shabaab’ ee gobolada koonfurta fog ee Soomaaliya.
Amisom waxaa dhowaan lagu wadaa in bisha Agoosto ay ku soo biiraan illaa 3,200 oo ka mid ah askarta Uganda kuwaasoo dhowaan tababar militari ku qaatay xero ku taalla duleedka magaalada Kampala.
Sida ay sheegayaan saraakiisha hawlgalka AMISOM, diyaarahan cusub ayaa loo adeegsan doonaa dagaalo ay qorsheynayaan inay ku qaadaan gobolada ay Al-Shabaab maamulaan ee Jubooyinka iyo Shabeelooyinka oo ka duwan dagaalada Muqdisho oo ah magaalo, waana taasi sababta taliska AMISOM uu ugu baahday in dagaalada uu u adeegsado diyaarado. Hase yeeshee waxaa dhanka kale laga walaacsan yahay in diyaaradaha oo duqeymana geysan kara ay dadka rayidka waxyeelaan.
Haddii diyaaradahan ay soo gaaraan AMISOM waxay noqoneysaa markii ugu horeysay oo dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab ay qeyb ka qaataan diyaarado tan iyo sanadkii 2007 markaasoo AMISOM ay ka hawl bilaabeen Muqdisho iyagoo caawinayey DKMG ah.
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Oo Ka Hadlay Xaalada Deegaanada SSC Iyo Hadal Dhawaan Kasoo Yeedhay Hogaamiyihii Hore Ee SSC (Dhagayso)
Madaxwaynaha Maamulka khaatumo State Of Somalia Mudane Mxamed Yuusuf Jaamac Halac (Indha sheel) ayaa ka hadlay Xaalada guud ee gobolada Sool, Sanaag, iyo Cayn iyo waliba waxa u qorshaysan Maamulka Khaatumo, isagoona Madaxweyne Indha Sheel uu xusay in 3-da Bilood ee ugu horaysa ay ku raja weyn yihiin ka xukuumad ahaan in ay dhisaan Baarlamaanka Maamulka Khaatumo.
Madaxweyne Mxamed Yuusuf Jaamac Halac (Indha sheel) ayaa xusay in dastuurka Maamulka Khaatumo uu yahay mid diyaarsan isla mar ahaan taana uu ku xidhan in la dhiso golaha Baarlaamka Maamulka Khaatumo, isagoona sheegay Madaxweyne Indha Sheel in ay samayn doonaan mashaariic aad u badan iyo ganacsi xor ah si ay bulshadu isku dhex gasho.
Madaxweyne Mxamed Yuusuf Jaamac Halac (Indha sheel) ayaa sidoo kale ka hadlay hadal kasoo yeesdhay Hogaamiyihii hore ee SSC Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xagla Toosiye) isagoona sheegay in wada hadalada iyo nabaduba ay tahay mid u dhaxaysa labada Maamul ee Somaliland iyo Khaatumo isna uu u maray wado khaldan hadaba halkan ka dhagayso waraysigaas oo dhamaystiran.
Xafiiska Buuhoodle Soomaaliya
In Ka Badan 50-Garsoore Oo Ka Socda Maxkamadaha Dalka Soomaaliya Oo Maanta Lagu Dhaariyay Madaxtooyada Dowladda (Daawo Sawiro)
Munaasabadan lagu dhaarinayey 52 garsoore oo ka socda maxkamadaha dalka soomaaliya sida Maxkamada sare, Racfaanka, Gobalka iyo Degmooyinka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Dowladda KMG Soomaaliya, Wasiiradda garsoorka, Ganacsiga, Arimaha gudaha, Gudoomiyaha maxkamada sare ee Dalka Soomaaliya, Taliyayaasha Ciidamada Maletariga iyo Kuwa Police-kaa mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Marti sharaf kale.
Ugu horeyntii wasiirka garsoorka iyo arimaha diinta xukuumada Soomaaliya ayaa dhaariyey 52 garsoore oo ay Dowladdu ugu talagashay in ay howl galiyaan maxkamadaha dalka soomaaliya.
Dhaarta kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Mudane Axmed Xasan Gaboobe Ugaas Bille oo ah wasiirka wasaarada garsoorka awqaafta iyo arimaha diinta waxa uuna ku guubaabiyey garsoorayaashan maanta la dhaariyay inay hawshooda u gutaan si alle ka cabsi leh.
Sidoo kale gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka soomaaliya mudane Ceydiid C/laahi Ilka Xanaf oo isaguna ka hadlay munaasabadani dhaarinta ah ayaa tilmaamy in garsoorka uu aasaas u yahay nidaamka dowliga ah, isagoo balan qaaday gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka soomaaliya in inta karaankooda ah ay si cadaalad ah wax u garsoori doonaan.
Madaxweynaha Dowladda KMG Soomaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qeexay in hadii aan la dhisin laamaha garsoorka dowladu aysan shaqayn Karin waxa uuna tilmaamay in dowladiisu ay bilow wanaagsan u tahay dhisitaanka maxkamada dalka.
‘Waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin uu soo maray dalka in saameeyn xoogan ay ku yeesheen garsooka,laakiin muhiimadu waxaa ay tahay in unuga Garsoorka salka loo dhigo,marka anagoo og duruufta adage e aad ku jiritiin hadana waxaan rabnaa in damiirku idin hogaamiyo,Soomaalinimadu idin hogaamiso masuuliyada aad xanbaarsateen ee aad u dhaarateen aad u hogaansamtaan illaahna idinla garab galo’ ayuu Madaxweyne Shiikh Shariif kula dardaarmay garsoorayaasha maanta loo dhaariyay maxkamadaha dalka.
Waxaan shaki kujirin hadii uusan garsoor jirin in aaney dowladi jirin taasina macnaheedu waa dowlada uu madaxweynaha ka yahay Shariif Shiikh Axmed inay ku guuleysatay dhisida hay’adah garsoorka dalka waxaana looga fadhiyaa garsoorka maanta la dhaariyay inay wax badan ka qabtaan arimaha cadaalada iyo garsoorka.
Hay'adda Nabad Sugida Oo Muqdisho Kusoo Bandhigtay Rag Kasoo Goostay Al-shabaab (Daawo Sawiro)
Waxaa Maanta Xarunta Hay’adda Nabad Sugida Dowladda KMG Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay Saraakiil ka tirsanaa Kooxda Al-Shabaab kuwaa oo la sheegay in ay kasoo goosteen kooxdaasi kuna soo biireen Dhinaca Dowladda .
Ragan Al-Shabaab kasoo goostay ayaa ahaa labo Nin oo kooxdaasi muddo ka tirsanaa Midkoodna uu u qaabilsanaa Dhinaca Dacwada Al-Shabaabka oo ku sugnaan jiray Gobolada Bay iyo Bakool halka midka kalena uu ahaa Askari Al-Shabaab ka tirsanaa.
Labadan Nin ee Al-Shabaab kasoo goostay ayaa maanta Muqdishana lagu soo bandhigay, iyagoona lagu kala Magacaabo Xasan Macalin Ibraahim “Xassan Al wajidi” iyo Yalaxow Xasan Calasow waxa ayna sheegeen mas'uuliyiinta Hay'adda Nabad Sugidu in ay ragani ay iyagu iskood isku soo dhiibeen.
Xasan Macalin Ibraahim “Xassan Al wajidi” oo ahaa Sarkaal Al-Shabaab Dacwada u qaabilsanaa ayaa Warbaahinta kula hadlay goobtii lagu soo bandhigay isagoona sheegay in go’aankan ay gaadheen kadib markii ay u adkaysan waayeen hab dhaqanka Foosha Xun ee AL-Shabaab ku dhaqmayaan waa sida uu yidhiye.
Sidoo kalena waxa uu sheegay in Shabaab gardaro ku Gowracaan dadka Shacabka hantidoodana ka dhacaan isagoo Shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay iska cafiyaan hadii ay jirto wax dhibaato ah uu ugu gaystay magaca kooxdaasi intii uu ku shaqaynayey.
Mudooyinkii dambe waxaa yaraa Dagaalyahanada Al-Shabaab kasoo goosta ee Magaalada Muqdisho lagu soo bandhigo, hasa ahatee waxaa badnaa Raga iyaga oo wali Al-Shabaaba ka tirsan Howlgalo ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo Gobolada Dalka ay kusoo qabteen Ciidamada Nabad Sugida ee Dowlada KMG.
Gudoomiyaha Demagada Xudur Oo Ka Hadlay Dagaal Xalay Ku Dhexmaray Ciidamada Dowladda Iyo Kuwa Al-shabaab Degmadaasi (Dhagayso)
Gudoomiyaha Degmada Xudun ee gobolka Bakool Maxamed Macali Axmed ayaa ka war bixiyey dagaal habeenimadii xalay ahayd ku dhexmaray Degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Ciidamada Dowladda Iyo Ururka Al-shabaab, isagoona xusay Gudoomiyuhu in dagaalkaasi uu san wax khasaare ah kasoo gaadhin Ciidamada Dowladda Hadaba isaga oo arimahaas iyo kuwa kaleba ka hadlay halkan hoose ka dhagayso....
Wareegto Kasoo Baxday Xafiiska Madaxweyne Shariif Oo Lagu Magacaabay Degmooyin Cusub (Akhriso Wareegtada)
Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha dowlada KMG Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa lagu magacaabay Degmooyin cusub oo hoostagaya goballada Shabeelaha Hoose , Shabeeleha Dhexe , Hiiraan iyo Jubbada Hoose.
Sida ku cad wareegtadani oo uu ku saxiixan yahay madaxweyne Sheekh Shariif ayaa lagu cadeeyey in degmooyinka uu magacaabay Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed loo eegay qodobaka 39aad Baqradiisa labaad xarafka (A) iyo Baqrada labaad isla qodabkaan ee axdiga KMG ee Soomaaliya ayaa madaxweynuhu uu u aqoon saday deeganadaa in ay kala yihiin:- Leego, Goobaale, Jameeca Jiliyaale, Gamboole, Shaw, Buqa qable, Ceel-cali, Baar , Beerxaana iyo Raaskamboon.
Hadaba wareegtadani ayaa waxaa ku saxeexan Madaxweynaha dowlada KMG iyadoona so toos ah wareegatani uga baxday wasaarada arimaha gudaha iyo amniga qaranka.
Ma aha markii ugu horaysay ee wareegto noocan oo kale ah ay kasoo baxdo xafiiska Madaxweynaha taas oo si rasmi ah loogu shaaciyey in degmooyin hor leh ay kusoo kordheen kuwii hore u jiray.
Xafiiska Wararka Ee Shabakadda Jornalizem.com
Agaasimaha La Dagaalanka Argagixisadda Ee Dalka Uganda Oo Shaaciyey In Ay Hayaan Madixii Is-qarxiye Soomaali Ah Oo Ka Dambeeyey Qaraxyo Ka Dhacay Kampala
Sida maanta lagu soo daabacay Wargeyska ‘Saturday Monitor’ ee ka soo baxa Caasimadda dalka Uganda ee Kampala, ayaa lagu shaaciyey in Police-ka dalkaasi weli hayaan madaxa Is-qarxiye Somali ah oo lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyadii bishii July 11, 2010 ka dhacay Caasimadda dalkaasi ee Uganda.
Wargeyskan ayaa waxa uu sheegay inay Police-ka dalka Uganda si qarsoodi ah muddo labo sanno ah u hayaan madax Is-qarxiyahaasi oo magaciisa lagu soo koobay Mursal, kaas oo lagu tuhunsan yahay inuu maleegay qorshooyinkii qaraxyaddii mataanaha ee lala beegsaday labo goob oo lagu daawanayey Ciyaartii ugu dambaysay ee Finalka ee Koobka Adduunka oo bishii July 11, 2010 lagu soo gaba gabeeyey dalka Koonfurta Afrika.
Is-qarxiyaha oo magaciisa lagu soo koobay Mursal ayaa la sheegay in madaxiisa laga soo helay meel ku dhow Baar ay Ganacsato Ethiopian ku leeyihiin magaaladda Kampala oo habeenkii uu qaraxu dhacayey lagu daawanayey Ciyaarta Finalka ee Koobka Adduunka.
Wargeyska ‘The Saturday Monitor’ ayaa waxa uu qoray in madaxa Is-qarxiye si qarsoodi ah loogu hayo Cisbitaal ku yaal magaalada Kampala oo sababo dhinaca ammaanka magaca Cisbitaalka loo xusi waayey.
Agaasimaha Hay’adda La-dagaalanka Argagixisadda ‘Counter Terrerism Director’ ee dalka Uganda, John Ndugutse, ayaa u xaqiijiyey Wargeyska ‘The Saturday Monitor’ inay weli hayaan madaxa Isqarxiyihii 7/11/2010, wuxuuna xusay inay weli la’ yihiin cid soo sheegata.
‘Waan haynaa madaxa ISqarxiyaha, Mr. Mursal, waxaana weli wadnaa baaritaanno naga caawiya Kiiskan, si aan madaxa u geyno Maxkamadda’ ayuu yiri John Ndugutse oo maalintii Khamiista ee la soo dhaafay u wearamayey Weriye ka tirsan Wargeyska The Saturday Monitor.
Isqarxiyaha madaxiisa la hayo ee magaciisa lagu soo koobay Mursal, ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay Qaraxyaddii Mataanaha ee bishii July 11, 2010 ka ka dhacay Ethiopian Village Restaurant iyo Naadiga lagu ciyaaro Ciyaarta Rugby ee Kyadondo Rugby Club’ oo habeenka ay qaraxyadda dhaceen lagu daawanayey Ciyaarta Finalka ee Koobka Adduuka.
Kooxda Mintidiinta ee Al-shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeeyeen qaraxyadaasi oo ay ku naf waayeen ugu yaraan 78-qof, tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhacdadaasi awgeed, waxay Boliska Uganda xirxireen ugu yaaraan 30-qof oo lagu xiriirinayo qaraxyadaasi, iyadoo qaarkood la sii daayey, halka kuwo kalena ay Maxkamad u socoto.
Ciidamada Dowladda Oo Howlgal Kusoo Qab Qabtay Masoomayaal Raashin Ku Sameysanayey Magaalada Muqdisho
Ciidamada dowladda ayaa howlgal ay ka sameeyeen Degmada Xamar weyne kusoo qab qabtay rag masoomayaal ah oo raashin ku karsanayey mid kamid ah buushashka laga cunteeyo.
Howlgalkan ayaa daba socday go'aan kasoo baxay Wasaarada Diinta iyo Awqaafta, ee Dowladda KMG Soomaaliya kaas oo lagu farayey Hay'adaha ammaanka inay tallaabo ka qaadaan masoomayaasha iyo goobaha laga cunteeyo ee xlliyada ay dadku sooman yihiin.
Taliyaha Saldhiga Xamar weyne Col. Maxamed Dahir ayaa u sheegay Warbaahinta Muqdisho in dadka ay soo qabteen ay yihiin rag masoomayaal ah iyo kuwo raashin u karinayey isagoona arintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi "Anagoo fulineyna amarkii Wasaarada Diinta iyo Awqaafta, howl gal maanta laga sameeyo goobo yar yar oo aan aheyn maqaaxidaha weyn ayaa kuwo masoomayaal ah iyo kuwii u karinayay ku soo qabanay, hada waa xiran yihiin"
Sidoo kalr taliyuhu waxaa uu sheegay in howlgalkan ay fuliyeen Ciidamada booliska ee saldhiga degmada Xamar weyne, isla markaana lagu guulaystay goobihii qarsoodiga ahaa ee laga cunteenayay in la xidho.
Dhowaan ayay ahayd markii Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ay ku amartay in la xidho goobaha maqaaxiyada ah ee xiliga la sooman yahay wax lagu kariyo waxa ayna digniin u jeedisay wasaaradu dadka masoomayaasha ah.